WhatsApp ကိုနောက် Huawei ဆိပ်ကမ်းများတွင် install လုပ်၍ မရပါ Androidsis
WhatsApp ကိုနောက်ထပ် Huawei ဆိပ်ကမ်းများတွင်တပ်ဆင်။ မရပါ
အမေရိကန်အစိုးရနှင့် Huawei ပြissueနာနှင့် ပတ်သက်၍ များစွာပြောခဲ့သည်။ Huawei ၏နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများအကြောင်းကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့သောပထမဆောင်းပါးများတွင် Facebook မှဖြစ်နိုင်ခြေကိုဆွေးနွေးခဲ့သည် သူတို့၏ application များကို Huawei ဆိပ်ကမ်းများ၌တပ်ဆင်ခြင်းကိုပိတ်ပင်ထားပါ.
developer တစ်ယောက်သည် application တစ်ခုတပ်ဆင်ခြင်းကို terminal အနည်းအကျဉ်းဖြင့်ကန့်သတ်ခြင်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်က VLC နှင့်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ကြရ ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကကုမ္ပဏီ၏အက်ပလီကေးရှင်းများ (Facebook၊ Instagram နှင့် WhatsApp) ကိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် သင်၏နောက်ဆိပ်ကမ်းများတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဆောင်းပါးအတော်များများ၌မှတ်ချက်ပြုထားသည့်အတိုင်းယနေ့စျေးကွက်တွင်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သော Huawei ၏ဆိပ်ကမ်းများ၌ရရှိနိုင်သောအပလီကေးရှင်းများအားလုံး၊ သူတို့သည်မည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိဘဲရရှိနိုင်နှင့်အလုပ်လုပ်ဆက်လက်လိမ့်မည်.
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Google Play စတိုးကိုဆက်လက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဤဆိပ်ကမ်းများသည်အနာဂတ်အတွက်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကန့်သတ်ထားမည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့မသိသေးတာကတော့သူတို့ဟာ Google ရဲ့နောက် version တွေကိုနောက်ဆုံးအဆင့်ကို update လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် Google ကအမေရိကန်ဥပဒေနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သီအိုရီအရမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာပါ။
အမှန်မှာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်လူ ဦး ရေ၏အချို့ကဏ္amongများ၊ အထူးသဖြင့်အငယ်ဆုံးသောသူများကြားတွင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုလက္ခဏာများပြသနေပုံရသည်မှာမှန်သော်လည်းယင်းသည်လုံးဝမဟုတ်ပါ။ WhatsApp သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောစာတိုပေးပို့ရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။
Huawei သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် operating system တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည် Google ၀ န်ဆောင်မှုများမရရှိသည့်အပြင် Play Store သို့ဝင်ရောက်ခွင့်လည်းမရပါ။ APK Mirror မှ download လုပ်ထားသော apk ကို install လုပ်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်သောသုံးစွဲသူများ၊ ဥပမာ WhatsApp၊ Facebook သို့မဟုတ် Instagram တို့မှ Huawei ၏မျှော်လင့်ချက်များကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အသုံးပြုမှုပေါ် မူတည်၍ WhatsApp နှင့် Facebook မပါသည့်စမတ်ဖုန်းသည်တန်ဖိုးနည်းသည်ဖြစ်စေ၊.
ယူဆရသည် တွစ်တာသည်လည်းအလားတူပိတ်ပင်မှုကိုလိုက်နာသည် ထုတ်လုပ်သူကိုစျေးကွက်တွင်တင်သောနောက်ဆိပ်ကမ်းများ၌သင်၏လျှောက်လွှာကိုထည့်သွင်းခွင့်မပြုပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » WhatsApp ကိုနောက်ထပ် Huawei ဆိပ်ကမ်းများတွင်တပ်ဆင်။ မရပါ
အရေးပေါ်အသိပေးစာ။ X Electric ကုမ္ပဏီမှ Mi Electric Scooter (M365) ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။